ဆေးခြောက် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဂံဂျာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြန်မာလို ဆေးခြောက်ဟုဆိုလျှင် နားလည်လွယ်၍ ရုက္ခဗေဒဘာသာ အားဖြင့် cannabis sativa and cannabis indica ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရာစုနှစ်များစွာကပင် ကျယ်ပြန့်စွာ ပေါက်ရောက်သိရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ပင်စည်အမျှင်များကို ကြိုးနှင့် အဝတ်အထည် ရက်လုပ်ခြင်းအပြင် ဆေးဝါးအနေဖြင့် အသုံးပြုသကဲ့သို့ ဆေးခြောက်ရှူခြင်းမှာ နားနေပျော်ရွှင်မှုအတွက် ရှေးယခင်ကပင် ခေတ်စား၍ ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာပါသည်။ ဆေးခြောက်အဆီကို bhang, ganja, hashish, resin ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် အပွင့်၊ အညွန့်နှင့် ရွက်ခြောက်တို့ကို grass, marijuana, spliff, weed ဟုခေါ်ကြသည်။ Skunkဆိုသည်မှာ ပြင်းသော ဆေးခြောက် အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ယင်းတွင်ပါဝင်သော အဓိကဓာတုပစ္စည်း THC (tetrahydrocannabinol)ပါဝင်မှုနှုန်းမှာ သာမန်ဆေးခြောက်ထက် နှစ်ဆ၊ သုံးဆမျှ မြင့်မားပေသည်။ ဆေးခြောက်အမျိုးပေါင်းမှာ ရာချီ၍ များစွာရှိပြီး ဗန်းစကားအဖြစ် AK-47, Knock Out, Destroyer ဟု ပြင်းထန်မှုကို ညွှန်း၍ အမည်များ ပေးထားကြသည်။
ဆေးခြောက်ကို ဆေးလိပ်တွင် ဆေးရွက်ကြီးများ နှင့် ရော၍ သောက်ရှူသကဲ့သို့ မီးရှို့၍ အငွေ့ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ရှူရှိုက်တတ်ကြသည်။ ထို့ပြင် လက်ဘက်ခြောက်၊ အကြမ်းခြောက်ကဲ့သို့ အသုံးပြုခြင်း၊ မုန့်မျိုးစုံနှင့် ဟင်းလျာများတွင် ထည့်သွင်းချက်လုပ် စားသောက်တတ်ကြသည်။ 
ငယ်ရွယ်စဉ်အခါမှာ ဆေးခြောက်(Cannabis)သုံးစွဲခြင်းသည် နောင်နှစ်ရှည်တွင် စိတ္တဇရောဂါကြီး (Psychosis) ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်နိုင်ချေကို တိုးမြင့်စေသည်နဟု သုတေသနပညာရှင်များက ဆိုသည်။ Dutch လူမျိုး သုတေသနပညာရှင်များက ပိုက်ဆံပင်ဟုခေါ်တွင်သော ဆေးခြောက်ပင် (cannabis) နှင့် စိတ်ဝေဒနာများ ဆက်စပ်ပုံကို ၁၀နှစ်တာ သုတေသနပြုလုပ်ပြီးနောက် လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုသည် စိတ္တဇဝေဒနာကိုနှစ်ဆ တိုးပွားစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ လူငယ်များကို ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၊ စားသုံးခြင်းမှ ဟန့်တားရန် အာဏာပိုင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများကို သုတေသနပညာရှင်များက ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ လူငယ်များ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကို ဟန့်တားနိုင်ခြင်းဖြင့် စိတ္တဇာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းကို လျော့ကျစေမည်ဟု ဆိုပါသည်။
ရိုးရာဓလေ့ထုံးလမ်းစဉ်လာအဖြစ် ဆေးခြောက်ကို စားသုံးမှုများသည် စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါဖြစ်သော Schizophrenia ရောဂါဖြစ်ပွားစေကြောင်း သုတေသနတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော လန်ဒန်မြို့၊ Kings College ၊ Institute of Psychiatry မှ Robin Murray က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလတွင် ဆေးခြောက်ကို ၆ နှစ်နှင့်အထက်သုံးစွဲသူများသည် စိတ်မူမမှန်မှုများ ၊ အမြင်အာရုံမှောက်မှားခြင်းများကို နှစ်ဆတိုးဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း British Medical Journal တွင် သုတေသနမှတွေ့ရှိချက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆေးခြောက်(Cannabis)သည် ကမ္ဘာအနှံ့နေရာများတွင် ဥပဒေအရတားမြစ်ထားသော မူးယစ်ဆေးဝါးဖြစ်သည်။ သုတေသီများက ဆေးခြောက်နှင့် စိတ်မူမမှန်မှု ဆက်စပ်နေမှုသည် မတော်တဆတိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်သည် မဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းခြင်းမရှိသေးပေ။ စိတ်မူမမှန်သူများသည် သူတို့၏ ဝေဒနာကို ရှောင်တခင်သက်သာစေရန် ဆေးခြောက်ကို သုံးစွဲလေ့ရှိကြသည်။ Dutch လူမျိုး Jim van Os ဦးဆောင်သော Maastricht University မှသုတေသီအဖွဲ့သည် အသက် ၁၄ နှစ်နှင့် ၂၄ နှစ်အကြား ဆယ်ကျော်သက်နှင့် ငယ်ရွယ်သူပေါင်း ၁၉၂၃ ဦးကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုကို ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆေးခြောက်သုံးစွဲနေသည်ဟု ဆိုသော ဆယ်ကျော်သက် တစ်ဦးချင်းစီကို နဂိုမူလကတည်းက စိတ်ဝေဒနာ လက္ခဏာများ ခံစားနေရသူများနှင့် သီးသန့်စီ ခွဲထားပြီးနောက် ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနှင့် စိတ္တဇရောဂါ ဆက်စပ်မှုကို လေ့လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုအစကတည်းကပင် ဆေးခြောက်သုံးစွဲနေပြီးဖြစ်သောသူများသည် ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေသော စိတ်ဝေဒနာကို နှစ်ဆတိုး ခံစားရကြောင်း သုတေသနက ဆိုပါသည်။ ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုကို ဥပဒေအရ တားမြစ်ရန်၊ ဥပဒေပြုလုပ်ရန် အာဏာပိုင်များအား University of Liverpool မှ clinical psychology ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်သူ Peter Kindermanက အကြံပေးပြောကြားခဲ့သည်။ 
↑ ကြေးမုံသတင်းစာ၊ (၂၀. ၆. ၂၀၁၈)စာ-၁၀
↑ Pot can double psychosis risk by Kate Kelland (REUTERS)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆေးခြောက်&oldid=502672" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။